आज, हाम्रो कथा को नायक संसार-प्रसिद्ध अभिनेता, Screenwriter, निर्माता, संगीतकार र कमेडी को मास्टर पहिचान हुनेछ - एडम Sandler। हामी आफ्नो क्यारियर र व्यक्तिगत जीवनका केही विवरण जान्नको लागि हलिउड स्टार थाह गर्न प्रस्ताव।
जीवनी आदम Sandler
भविष्यमा संसारमा-प्रसिद्ध हास्य अभिनेता अमेरिकी ब्रूकलिन मा9अगस्ट, 1966 मा जन्म भएको थियो। आफ्ना पिता नाम स्टेनली एक बिजुली ईन्जिनियर थियो, र मेरो आमा - जूडिथ - स्कूलमा सिकाउनुभयो। चाखलाग्दो कुरा, ठूलो-हजुरबुबा एक युक्रेनी आदम थियो: दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा उहाँले एक अमेरिकी विवाहित थियो, र उहाँले तिनलाई थर लिए Sandler। हलिउड भविष्य तारा पाँच वर्षको हुँदा उनी र उनको परिवार सारियो म्यान्चेस्टर, न्यू हैम्पशायर को राज्य मा स्थित।
स्कूलमा अध्ययन गर्दा आदम Sandler मान्छे हाँस्न बनाउन उल्लेखनीय प्रतिभा खोज। तर, केटा यो उपहार, उहाँले साँच्चै शानदार बुझाइएको जहाँ प्रतियोगिता कमेडी skits, भाग लिएको छैन कहिल्यै आफ्नो क्यारियर मा उहाँलाई उपयोगी छ भन्ने थिएन। उच्च स्कूल पछि, उहाँले क्लब र कलेजहरूलाई धेरै मा देखा जो अध्ययनको दौडान, विश्वविद्यालय को न्यूयोर्क मा भर्ना।
त्यो नाम अन्तर्गत धेरै लोकप्रिय टिभी संयुक्त राज्य अमेरिका मा श्रृंखला को एक एपिसोड मा देखा गर्दा टिभीमा पहिलो पटक आदम 1980 मा आए "शक Crosby।" चलचित्र मा Sandler को debut 1989 मा भयो। यो साईट अडान-अप हास्य अभिनेता Shekki Moskovitsa जसको भूमिका र एडम खेले, को इतिहास बारे बताएको फिल्म "Overboard जाँदै", थियो। एउटै अवधिमा, Sandler कडा विभिन्न कमेडी क्लब मा advocated।
चाँडै, उहाँले लस एन्जलस उसलाई निम्तो गर्ने, र Lorne Michaels, SNL च्यानलमा शो "शनिबार रात प्रत्यक्ष" को निर्माता सुझाव डेनिस मिलर, भेटे। 1990 मा आदम को परिणाम एक लेखक रूपमा परियोजनामा भाडामा रूपमा। तथापि, उहाँले स्केचहरू अभिनय र गीतहरू गाइरहेका, फ्रेम मा देखा पर्न केही महिना सुरु हुन्छ। कि Sandler एक पेशेवर अभिनेता रूपमा केवल कथित पछि।
1993 मा, एडम भाग कमेडी "Coneheads" को फिलिम मा, एक cameo भूमिका धूर्त नक्कली उत्पादनको Carmine नाम विक्रेता प्ले गरे। निम्न वर्ष, Sandler "टाउको मा हावा।" मा मुख्य पात्र पिप प्ले एउटै 1994 एडम हकदार एक स्टूडियो एल्बम रेकर्ड गर्न एउटा सम्झौता मा प्रवेश मा कम्पनी «वार्नर Bros» संग "तिनीहरू तपाईंसँग हाँस्न हुनेछ"। यो कामको लागि उहाँले पछि पनि एक प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार "Grammy" को लागि नामांकित भएको थियो।
आदम Sandler: Filmography, निरन्तर क्यारियर
जवान अभिनेता र संगीतकार कामहरू अझ छन्। 1995 मा, उनले चलचित्र मा अभिनय "बिली म्याडिसन।" एक वर्ष पछि, दर्शक दुई स्ट्रिप्स "धन्य Gilmore" र "Bulletproof" मा ठूलो स्क्रीन प्रिय हास्य अभिनेता फेरि हेर्न मौका पाएका थिए।
प्रतिभा साथै उहाँले उपयोगी सम्पर्क बाँध एउटा अचम्मको क्षमता पनि थियो किनभने अभिनेता गरेको क्यारियर, निरंतर उकालो थियो। फलस्वरूप, हलिउड मा एडम Sandler बस तातो केक जस्तै थियो, र ठूलो स्क्रिनमा हरेक वर्ष आफ्नो सहभागिता साथ केही तस्वीर आउँछ। "मामा गरेको केटा" र "विवाह गायक": 1998 मा, त्यो दुई चलचित्रमा तारा अङ्कित। निम्न वर्ष मा, शो डेनिस डगलस "ठूलो पिताजी", चाँडै दर्शकहरूलाई लाखौं हृदयमा कब्जा जो को प्रीमियर।
आदम Sandler, अर्को पछि एक साथ सिनेमा को स्क्रीन र नयाँ सहस्राब्दी को शुरुवात आउन छोडेनन्। "पशु", "पहिले देखि न जाया" र "अमेरिका: नायक एउटा Tribute" 2001 मा उहाँले तीन चित्रहरु को शूटिंग मा भाग लिए। म निर्देशक उहाँलाई चाहन्थे थियो ठ्याक्कै क्यामेरा फोटो आफ्नो क्षमता लागि एडम लाग्यो भनेर भन्न पर्छ। स्टीवन Brill द्वारा "श्री कामहरूका", "मदिरा-मादक पदार्थ सेवन माया," द्वारा पावलले थमस एन्डरसन निर्देशित, "द हट Chick" Toma Breydi र "आठ पागल रातों» सेत Kearsley: 2002 मा, ठूलो स्क्रिनमा Sandler बस चार फिलिमहरु आउँछ।
निम्न वर्ष, आदम नाटकीय अभिनेता को असामान्य भूमिका मा दर्शक अघि देखा छ। यो फिल्म सेट मा आफ्नो साझेदार थियो जहाँ "रिस व्यवस्थापन", मा काम थियो Dzhek Nikolson।
अभिनेता लागि फलदायी र 2004 मा भएको थियो। आदम लोकप्रिय टेलिभिजन शो "शनिबार रात प्रत्यक्ष" को फिलिम मा भाग लिए पनि पत्रुस Segal गरेको "सबै वा केही" र तारा अङ्कित "50 पहिलो तिथिहरु।" "मजेदार मानिसहरू," "चक र लैरी" र अरूलाई: यो "जीवन लागि दूर नियन्त्रण संग क्लिक गर्नुहोस्" जस्ता चलचित्रमा Sandler काम पछि थियो। र Sandler सधैं एक मुर्ख हास्य को रूप मा दर्शक अघि देखा छैन, तर पनि प्रेरक नाटकीय अभिनेता को भूमिका मा।
2010 मा, बाहेक जस्तै मुछिनुभएको सेलिब्रेटीहरू आदमलाई जहाँ फिलिम "स्कूलका साथीहरू", बाहिर स्क्रीन Salma Hayek, िईद्भस rok र रोब Schneider। कमेडी तीन वर्ष पछि यो फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो कि एक सफलता जस्तै, र दोस्रो भाग थियो।
2014 मा, वर्ष आदम Sandler सुविधा को स्क्रीन धेरै चित्रहरु मा उपज आशा छ :. "Shoemaker", "मिश्रित" र "पुरुष, महिला र बच्चाहरु"
को प्रतिभाशाली अभिनय बाहेक आदम Sandler पनि एक उत्कृष्ट लेखक हो। ": जीवन लागि दूर नियन्त्रण क्लिक गर्नुहोस्" र यो भूमिका मा, त्यो "रिवाइन्ड," "बिली म्याडिसन," यस्ता चलचित्रमा काम।
Sandler भनिन्छ «धन्य म्याडिसन» आफ्नै kinofirmu छ र फिलिमहरु उत्पादन मा लगी भएको छ। आफ्नो काम भन्दा सफल बीचमा निम्न छन् चित्रहरु: "Nikki, शैतानको, जूनियर," "भेष को मास्टर", "पशु", "रिस व्यवस्थापन," "श्री कामहरूका" र "तपाईंले Zohan गडबड छैन।"
यसबाहेक, पहिले नै उल्लेख, यो आदम र व्यावसायिक संगीतकार छ। मिति, उहाँले पाँच एल्बम रेकर्ड छ।
एक अभिनेता को व्यक्तिगत जीवन
आदम Sandler एक उदाहरणीय परिवार मानिस र दुई सुन्दर जवान छोरीहरू को पिता छ। 2003 मा, त्यो लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका प्रेमिका, अभिनेत्री र पूर्व मोडेल Dzheki Titon, पहिलो सेट मा 1998 मा भेट जो विवाह "ठूलो पिताजी।" विवाह सागर मा रोमान्टिक सेटिङ मा स्थान लियो। पाहुनाहरूको बीचमा पहिलो परिमाण यस्तो तारा देख्न थिए सहित धेरै सेलिब्रेटीहरू, थिए डस्टिन Hoffman, जेनिफर एनिस्टन र रोब Schneider।
2006 मा, एक छोरी Sadie म्याडिसन को नाम दिइएको थियो Sandler, जन्मिएका थिए। र दुई वर्ष पछि, आदम र आफ्नो पत्नी, जैकी अर्को केटी, सनी Madeline को गर्व आमाबाबुले भयो।
Adriana Esteves, ब्राजीलियाई अभिनेत्री, टेलिभिजन श्रृंखला को तारा, जवान पुस्ता को मूर्ति
चलचित्र "127 घण्टा": समीक्षा, षड्यन्त्र,, अभिनेता र भूमिकाको
कसरी Windows 7, 8, XP मा एक सुरुवातमा खोल्न
म एक मौरी चिल्नु समातिए? को सुनिंनु हटाउन आवश्यक छ छिटो!
सजावटी धनु - उद्यान, lawns र lawns को सजावट लागि एक रोचक बोट
Steller गरेको समुद्र गाई - sirens दस्ते को लोप प्रजाति
एक रोटी गरेको दर्जन को यो डर छ